Transformers lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Transformers dia mandroso robot izay afaka manova ny endriny, fitaovana tamin'ny fitaovam-piadiana maro. Raha ilaina, dia hivadika ho manidina milina, fitaovana submarines sy tany amin'ny kodiarana na lalamby. Ity ady fiara, ary bebe kokoa momba ny fananana dia hita ao amin'ny aterineto lalao Transformers. Vokatra rehetra dia nanolotra maimaim-poana sy manomboka milalao, ianareo dia ho afaka ny handray anjara amin'ny hetsika ara-miaramila, ao tohaina tao an-tanàna avy amin'ny fahavalo. Fametrahana ny vy ao amin'ny paritra ny tafika, ny fandrakofana ny asa isan-karazany ny faritany iray manontolo izay latsaka eo ambanin'ny afo fahavalo fanafihana.
Transformers robots miafina: Force Combiner
Transform Car Grand Robot 3d
Transformer robots amin'ny miafina: Comic Creator
Transformers BumbleBee mozika mozika
Transformer robots amin'ny miafina: miaro ny tanàna mimanda
Transformer robots amin'ny miafina: Faction Faceoff
Transformers Robots in Disguise: Mpanafika Super Mini-Con
Transformers Fahano ny Grimlock
Transformers ny Knight farany: Quest for Optimus Prime
Transformer robots amin'ny miafina: Manangana ady
Bugs Hidden Spots
Etazonia Robot Transform Robot Fighting Robot
Robot an'ny Transformers ao amin'ny Misiônan'ny Disguise: Vollgas
Transformers ady Fa ny Matrix
Transformers car wheels
Transformers Robots Super miafina Mini-mpisoloky Mpanafika
Fiovan'ny fiaran'ny polisy amerikana
Fanangonana piozila Jigsaw Transformers
Lalao Transformers tamin'ny Category:
Farany Transformers lalao
Lalao Online Rehetra Transformers lalao
Ny malaza Transformers
ny ankizilahy tia ny milalao vy samy hafa ny zavatra, fiara, fitaovam-piadiana sy ny milina, ary rehefa mitambatra ny rehetra miaraka, ny mahafinaritra tsy misy fetra. Rehefa nampidirina ao amin'ny fivarotana voalohany milina Transformers, ny lehilahy ampahany amin'ny mponina nivadika ho mpanao mpankafy kilalao ity. Dia nomeny fahafinaretana lehibe hanova ny endriky ny ireo olona goavam-be, manova azy, ny fiaramanidina mpiady tao amin'ny fiara, avy eo mandeha milina, fiadiana amin'ny nify ny vy. Kilalao toy izany, indrindra ny rehetra, ny poti-tsoavaly sy feo ireo fihetsehana sy manokana fampahavitrihana ny fanoitra, ny milina nanonona teny na feo mandrahona ny poa-basy. Ary raha ilay robot afaka handeha, dia ny haavon'ny nofy.
Sambatra tompony Transformers tsy hiala aminy, na dia any am-pianarana, na teo an-tokotany amin'ny drivotra nikarakara ady ny Titans. Na dia eo aza ny fahafahana mutate, avy amin'ny ankizy Nila saina ho tonga amin'ny ny fivoaran-draharaha. Ela na ho haingana, noloahany na dia ny tena mahaliana lalao. Toys handika, mpandahateny mipetraka ka nivadika ho rava ny fahafinaretana nalefa ka hatrany ambany ny boaty, ary tsy ela tao amin'ny fako. Fa ny hafanam-po dia tsy handeha sy nividy lafo vidy vaovao modely ho an'ny ray aman-dreny matetika no goavana. Tantara an-tsary sy sarimihetsika Transformers efa nandinika rehetra ary fa reraka. Fa ny lalao video Transformers 2 mitaona fanahy indray araka ny manolotra hafa fari-fialam-boly sy ny fahafahana.
Ny horonan-tsary "Transformers 2" nanompo ho toy ny fototry ny famoronana ny andiam-lalao video. Megatron sy ny Deseptekony hanafika ny tanàna. Mba Mandositra ny fanafihana, dia mila hanome ny ady Transformers ka ny fahavalo nivoaka avy tao amin'ny faritra hamono ny iray amin'ireo milina, avy hatrany amin'ny isan-karazany ny olona. Isaky izay mandeha, ny fahavalo dia ho tonga amin'ny vaovao, kokoa hery mahafaty ihany, nefa ny fiara dia hanangana ny sehatra. Mba hahitana izay toetra manana ny vy miaramila, manetsika izany fotsiny Izahay no manao sora totozy ary ho hitanao eo amin'ny farany ambany amin'ny an-tsaha toetra tsirairay.
Games Transformers ho an'ny olona rehetra
Transformers 3 lalao eo amin'ny lohahevitry ny sarimihetsika "Transformers: Ny ambadiky ny volana", manolotra indray ny zava-nitranga, fa ny tena zava-dehibe, dia afaka maneho ny lafiny famoronana, nanangona Puzzles. Ireo olona goavam-be toy ny fanangonana Kristy, dia haneho sary ny olona farantsa Lalàn'i Mosesy. Avy sary ny sary, dia hahita ny safidy maro ho fanodinana ny milina, dia mijery mahavariana izany, zava-misy, inona no toa ho kely kokoa, ary manomboka hifindra.
Online lalao Transformers 2 mba mitady zavatra toy izany dia mitovy amin'ny hafa ireo izay lalao. Voalohany, eo amin'ny sary hafa ianao dia hahita tsipiriany ny rafitra izay Fetsy nanova endrika ny ankapobeny ambadika. Avy eo, avy amin'ny fanangonana ny zavatra tokony mba hanangona modely vaovao mpanova, mahita fa samy nahita sombin-ny toerana. Just maka tapa iray hafa ka apetraho eo amin'ny semi-nivory milina.
Na izany aza, tsy maintsy hanandrana hilalao amin'ny Transformers, miady - dia noho izany, ka nanangana ny milina. Shootout an-dalambe na tany ivelany toerana - misafidy ny safidy. Ary afaka mifehy ny Transformers eo ambany rano ny trondro tianao kokoa? Avy eo mitsoraka ka hatrany ambany sy hifidy ny goavam-be. Fa rehefa misy ny loza, na dia vy biby tsy maintsy velona ao amin'ny toe-javatra ny fandringanana. Ao amin'ny iray amin'ireo lalao, dia nisy ady niokleary tsy ny an'izao tontolo izao ny olona, ​​fa hanimba ny milina, ary ny sasany amin'izy ireo dia miavaka ho antsasany, tsy maintsy mitady fomba toy izany velona amin'ny fanjakana miala tsiny.
Online lalao Transformers - lalao ho an'ny tovolahy sy ny lehilahy izay mahatsiaro tena aina tontolon'ny robot.